I-GA GF series free shelf plate plate freezer, China GA GF series shelf plate plate freezer Abakhiqizi, abahlinzeki, Factory - Square Technology Group Co., Ltd.
Isifriji samapuleti eshalofini esikhiqizwe yi-Square Technology singashesha ukumisa izinhlobo eziningi zemikhiqizo, njengezinhlanzi nezimfanzi, i-shellfish, imifino, inyama ehlukanisiwe, izinkukhu ezihlukanisiwe, nokudla okuningi okubandayo okufriziwe. Amapuleti abekwa ngokuvundlile njengamashalofu ngenkathi isikhala sesendlalelo silungiswa. Imikhiqizo izobekwa epuletini eshalofini ukuze iqhwa. Ihlukile kumazinga afriziwe avundlile wepuleti, usayizi wayo omkhulu ungadizayinelwa umthamo wokuqandisa ophakeme.
● Kuyinhlanganisela yefriji yokuqhuma nefriji yokuxhumana. Umkhiqizo uxhumane ne- ipuleti le-aluminium efrijini eceleni kwayo, kuyilapho abalandeli bashaya ukugeleza komoya okubandayo ngenhla nangezinhlangothi zomkhiqizo.
●Ipuleti lenziwe nge-grade grade aluminium. Isiqandisi sihamba phakathi Amapayipi amaningi ngaphakathi kwepuleti le-aluminium. Ipuleti lilula, liqinile, limelana nokugqwala futhi lihle ekuqhubeni okushisayo.
●Uhlaka luyinsimbi eshubile eshisayo, emelana nokugqwala kakhulu.
●Indawo ebiyelwe ifakwe ngcezu eyodwa yePolyurethane ikhihliza amagwebu ukuqinisekisa isakhiwo esiqinile futhi sinciphise ukulahleka okubandayo ngokususa amalunga.
Capacity Umkhawulo weqhwa:>3000kg / batch (Kususelwa ku: 15Kg / block, ubukhulu be-block: 600mm × 400mm × 80mm)
◆Inombolo yeplate: Izendlalelo eziyi-10 ezibandayo: 10
◆Plate okokuqandisa endaweni: 5500mm × 1200mm
◆Plate imvume: 144mm; Ukususwa kwe-Net: 110mm
◆Ukunikezwa kuketshezi: Pump
◆Umthwalo wesiqandisi: 105kw (+ 35 ℃ / -35 ℃) (Ngomoya opholile)
◆Isikhathi sokuphuzwa.:+20℃ Isikhathi esiphelelwe yisikhathi.:-18℃
◆Isivinini somoya phakathi kwamapuleti: 2m / s
◆Ubukhulu sekukonke: 8520mm (L) × 2115mm (W) × 2360mm (H)